Olee otú iji chọpụta Nwa Gị Learning Style
-Amụta ekwekọghị ekere òkè dị mkpa na otú ụmụaka na-amụta na otú ndị nkụzi na-akụziri. Ebe ọ bụ na ụmụ - karịsịa ndị na-ụlọ akwụkwọ ọta akara-agadi na-n'okpuru - na-akụziri bụ isi nne na nna ha, ọ dịkwa mkpa na anyị maara ihe nile anyị nwere ike ime banyere ụmụ anyị na-amụta ekwekọghị.
Dị ka Oxford Reference website, -amụta ekwekọghị na-ezo aka "akpan akpan ụzọ ndị mmadụ n'otu n'otu na-amụ ihe."
-Amụta ekwekọghị na-yitewere na Gardner si multiple intelligences. Ekpebi onye mmụta style na-enyere m ụmụ akwụkwọ nke afọ niile na-ekpebi otú ha ga na-awakpo na 'anataghị ikike' ihe n'ihi na mma njigide. "
Chọpụta nwa gị mmụta style
N'adịghị ka ihe ọtụtụ mmadụ nwere ike chee, Otu ọ dịghị mkpa ịbụ a gbaara onye nkụzi ma ọ bụ zụrụ azụ ọkachamara iji chọpụta a nwa mmụta style.
Nkwurịta okwu bụ isi, n'agbanyeghị ma ọ bụrụ na ị bụ nne na nna ma ọ bụ onye nkụzi nke na nwata.
N'ihi ya, ọ dị mkpa ka ndị nne na nna na-eji oge ha na ụmụ ha, na-esi mara ha dị ukwuu dị ka ha nwere ike.
Ihe kacha mma ndị nne na nna nwere ike ime bụ ịhapụ gara aga notions banyere mmụta na-elekwasị anya na nwa.
"Ndị nne na nna na-emekarị nwere a mbụ nwee echiche ahụ a na nwa a ga-nọ ọdụ n'ụlọ a oche, jụụ, sans music, etc. [iji mụta]. Nke a abụghị nanị na gburugburu ebe obibi mụta ma ị ga na-amaghị ihe na-arụ ọrụ gị na nwa gị ma ọ bụrụ na ị mara ya nke ọma. "
Otutu ịchọpụta a nwa mmụta ịke bụ n'ezie on chọpụtara.
Ọmụmaatụ, ma ọ bụrụ na ị na-ele a nkiri, i nwere ike na-eche na ịhụ onye na-ahụ na-aga aga na ịbịaru style (visual smart), onye-echeta soundtrack (auditory smart), na onye na-kasị emetụta mmetụta uche na omume (intrapersonal smart)! The N'ihi bụ fọrọ nke nta mgbe na-agbanwe agbanwe!
Na mgbakwunye, I believe that all kids are tactile learners. Kids ga-enwe ihe onwunwe na-metụ ma jide ka ha na-n'ụzọ zuru ezu na-amụta, otú ekwu okwu banyere ụrọ, manipulatives, etc. n'ezie, -amụta ekwekọghị-emekarị-abịa na a Nchikota abụọ ekwekọghị. "
Ebe a na-a ole na ole ihe i nwere ike ime:
1. Esi mara na nwa gị
Ọ bụrụ na ị chọrọ iji chọpụta nwa gị mmụta style, ị n'ezie mkpa ka ọ mata onye.
Na-elebara ihe ọ ese, na-ege ntị, and reads. Talk to him about his friends, ebe ndị ọ chọrọ ịga, etc. Ị ga-ahụ nke Ama ị ga-esi - gbakwunyere na bonding ga-eme ka gị nso.
Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị nwere ike ikwu na ụmụaka nwere ike ọ bụ otu onye nke atọ ma ọ bụ anọ bụ isi-amụta ekwekọghị (visual ma ọ bụ image-smart, auditory ma ọ bụ okwu-smart, tactile / kinesthetic ma ọ bụ ozu-smart, ezi uche ma ọ bụ nọmba-smart), eziokwu bụ na ụmụ nwere ike inwe a Nchikota ekwekọghị.
Mgbe ụfọdụ, ụmụaka mix elu na uwe dị ka ihe ha na-amụta. Ha nwere ike ịbụ auditory n'ihi ihe ụfọdụ na visual maka ndị ọzọ, ma ọ bụ ma.
2. -Eme ka ọtụtụ ihe nwa gị mmụta style
Ozugbo ị na-ahụ otú nwa gị na-ahụ ọrụ, ma na-aghọta ihe na-aga gburugburu ya, i nwere ike zuo ezu ya site n'isetịpụ anụ ahụ na temporal ebe mmụta. Ọmụmaatụ, Ọ bụrụ ị chọpụta na nwa gị na-arụ ọrụ nke ọma na music, gịnị mere na-ekwe ka ya na-amụ na eriri igwe nti na (ma ọ bụrụ na ị chọrọ a dị jụụ home, na bụ).
Ebe a bụ ihe atụ nke otú na-emekọ ihe dị iche iche iche iche nke ndị na-amụ:
N'ihi na visual learner, ọ bụla mmepụta ga na bịa na-atụ. Nkọwa a ga-adade ke esereese ụdị.
N'ihi na auditory learner, ha ga-ahụ songs ejikọrọ na ihe. YoutTube bụ nnukwu akụ maka ezinụlọ ha mgbe ahụ.
N'ihi na nke mmetụta uche learner, ọ bụla ihe ga-achọpụta na omume ọma akụkọ nke mere na echiche nke ga-amasị ya na-emetụta.
3. Gbanwee ya
O nwere ike ịbụ ogologo usoro n'ihi na i nwere iji nwalee nke mmụta style nwa gị nwere. Ọ ga-abụ nnwale na mmalite.
Dị ka nwa gị na-etolite, ya mmụta style agbanwe kwa, otú i nwere na-abụ na-emeghe ka mgbanwe na-ezi / n'otu style.
4. Ghọta na (na ojiji) ọzọ ekwekọghị
Atụla egwu inyocha ọzọ na-amụta ekwekọghị, ọbụna ma ọ bụrụ na ị chọpụtala ụmụ gị pụrụ iche style.
Ịmara a nwa mmụta style kwesịrị ịkwụsị a nne na nna si ịgagharị dịghị ihe ọzọ ka mma usoro. Na now aghọ gị imekwu ihe, otú ndị niile na uwe nwere ike tinye n'ọrụ n'ihi na a ọzọ holistic mmụta.
obi ụtọ ka ụmụaka, obi ụtọ ka ị na
Mee elu mee ala, ebe ọ maara na nwa gị mmụta ịke nwere ike na-abụ bara uru ọ bụghị naanị gị, dị ka a nne na nna, ma ya ma ọ bụ ya dị ka nke ọma. Ụzọ a, mmụta na-aghọ a dum otutu mfe - nke na-eme ka obi ụtọ ka ụmụ na aka enwe obi ụtọ nne na nna.